Mijery aho: Wristwatch ... miaraka amin'ny Android | Androidsis
Mijery aho: famantaranandro ... miaraka amin'ny Android
Ny Italiana an'ny Blue Sky dia nanomana ny famoahana ny ImWatch, famantaranandro misy famantaranandro miaraka amin'ny Android, izay mifandray amin'ireo finday avo lenta, mamela ny fiantsoana hatao amin'ny famataranandro, ary mahazo fampandrenesana aza avy amin'ny finday.
Ireo mpamorona ny ImWatch dia miantoka fa ny famantaranandron'izy ireo dia afaka mifandray amin'ny karazana finday rehetra, na Android, iOS, Blackberry, na Windows Phone, ary ny tena tadiaviny dia ny fifandraisana amin'ny telefaona eran'izao tontolo izao, mba hahafahan'ny mpampiasa betsaka kokoa Ampiasao io.
Ny fiasan'ny ImWatch dia mampahatsiahy antsika iPod Nano betsaka, milalao mozika izy, mamela antsika hijery sary, ary manana rindranasa kalandrie tsotra, fa ny mahasamihafa azy dia azo ampifandraisina amina karazana smartphone rehetra amin'ny alàlan'ny Bluetooth, hahafahanao mahazo karazana fampandrenesana rehetra ary mankafy serivisy fandefasan-kafatra na miditra amin'ny tamba-jotra sosialy.
Ny famantaranandro izay mandeha amin'ny Android 1.6, dia misy efijery mikasika 1.54-inch, fitadidiana anaty 4GB, ary mazava ho azy, «jack» an-tariby mba hahafahanao mihaino ny mozika rehetra. Mikasika ny fifandraisana, mampiasa Bluetooth 2.1 amin'ny EDR izy. Ho fanampin'izany, ny ImWatch dia misy CPU Freescale IMX233, izay mahatratra 454MHz, ary RAM 64 MB. Mikasika ny fizakan-tena, ity famantaranandro ity dia mety hahatratra 30 ora fampiasana tsy miato, ity miaraka amin'ny Bluetooth activated, noho ny bateria polymer lithium kely, izay miteraka 350 milliamp isan'ora.
Ny ImWatch dia efa misy ao amin'ny tranokala Blue Sky, ary hamidy amin'ny fivarotana manomboka amin'ny volana novambra, amin'ny vidiny 249 euro,
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Mijery aho: famantaranandro ... miaraka amin'ny Android